DOWNLOAD MASTER 2 NKE KACHASỊ ỌHỤRỤ - MMEMME NYOCHA - 2019
Nna-ukwu 2 2.2.0
Nhọrọ nke isiokwu dị iche iche na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite vidiyo gị n'etiti ndị ọrụ ndị ọzọ. N'ihi na ọnụnọ ntinye aka na-ebugharị ndepụta ọchụchọ ma daba na mpaghara ahụ "Akwadoro" ndị na-ekiri vidio nke ntụziaka yiri nke ahụ. Mkpụrụ akwụkwọ Keywords nwere ọkwa dị iche iche, ya bụ, ọnụ ọgụgụ nke arịrịọ kwa ọnwa. Iji chọpụta ndị ọkachamara pụrụ iche kachasị mkpa ga-enyere, nke a ga-atụle n'isiokwu anyị.
Nchịkọta Nchịkọta Dị elu maka YouTube
E nwere ọtụtụ saịtị pụrụ iche nke na - arụ ọrụ na otu ụkpụrụ - ha na - ele ozi gbasara ajụjụ ahụ e dere ma gosipụta isiokwu ndị kachasị amasị ma ọ bụ dị mkpa nye gị. Otú ọ dị, algọridim na arụmọrụ nke ọrụ dị iche iche dịtụ iche, n'ihi ya ị kwesịrị ịṅa ntị na ndị nnọchianya niile.
Anyị na-akpọ gị òkù ịmara onwe gị na ọrụ asụsụ Russian maka nhọrọ nke isiokwu Keywords KeyWord Tool. Ọ bụ ihe kachasị ewu ewu na RuNet ma nye ndị ọrụ ọrụ dịgasị iche iche. Ka anyị lebakwuo anya na ọgbọ nke mkpado maka YouTube na saịtị a:
Gaa na saịtị Weebụ KeyWord
Gaa na peeji nke KeyWord Main Tool ma họrọ taabụ na ebe nchọta. "YouTube".
Na nchịkọta nhọrọ, họrọ mba na asụsụ a họọrọ. Nke a na-adabere ọ bụghị naanị na ọnọdụ gị, kamakwa na netwọk onye ejikọtara, ọ bụrụ na e nwere otu.
Tinye isiokwu n'ime eriri ma mee nchọnchọ.
Ugbu a, ị ga-ahụ ndepụta nke mkpado kachasị mma. A ga-egbochi ụfọdụ ozi, ọ dị naanị mgbe ị debanyere aha Pro.
Na nri nke "Nyocha" enwere taabụ "Ajụjụ". Pịa ya ka ị hụ ajụjụ gbasara ọtụtụ ugboro metụtara okwu ị banyere.
Tụkwasị na nke a, ị kwesịrị ịṅa ntị na ike ịde ma ọ bụ mbupụ okwu ahọpụtara. Enwekwara ihe nzacha dị iche iche na nhazi nsonaazụ. N'ihe dị mkpa, Ngwa KeyWord na-egosipụtakarị arịrịọ ndị ọkachamara kachasị ewu ewu ma dị ọhụrụ, a na-emelitekwa nchekwa data nke okwu.
Kparser bụ ọrụ multiplatform multilingual keyword creation service. Ọ dịkwa mma maka ịdekọ vidiyo gị. Usoro nke ịmepụta mkpado dị nnọọ mfe, naanị onye ọrụ achọrọ:
Gaa na kparser website
Họrọ otu ikpo okwu site na listi "YouTube".
Dee mba nke ndị na-ege ntị.
Họrọ asụsụ ị họọrọ, tinye ajụjụ ma mee nchọnchọ.
Ugbu a, onye ọrụ ahụ ga-emeghe ndepụta na akara ndị kachasị mma ma na-ewu ewu n'oge ahụ.
Ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ ga-emeghe nanị mgbe onye ọrụ ahụ nwetara nsụgharị Pro nke ọrụ ahụ, Otú ọ dị, nsụgharị nnwere onwe na-egosipụta nlele nke arịrịọ ahụ site na saịtị ahụ n'onwe ya, nke ga-enye aka weta ụfọdụ nkwubi okwu gbasara ya.
BetterWayToWeb bụ ọrụ zuru ezu, ma n'adịghị ka ndị nnọchite anya gara aga, ọ naghị egosipụta ozi zuru ezu banyere okwu ahụ ma ghara ikwe ka onye ọrụ dee mba na asụsụ. Ọgbọ na saịtị a bụ:
Gaa na weebụsaịtị BetterWayToWeb
Pịnye na okwu achọrọ maọbụ ahịrịokwu na ọchụchọ.
Ugbu a, akụkọ ihe mere eme ga-egosipụta n'okpuru akara, na obere tebụl nwere mkpado ndị kachasị ewu ewu ga-egosipụta n'okpuru.
O di nwute, okwu ndi a choputara site na BetterWayToWeb ozi adighi adi mgbe obula na ihe a choro, ma, ihe ka otutu n'ime ha bara uru na ndi a ma ama n'oge a. Naanị atụlala ihe niile, ma ọ ka mma ime ya nke ọma ma ṅaa ntị n'okwu ndị e ji mee ihe na azụmahịa ndị ọzọ nke isiokwu ndị yiri ya.
Hụkwa: Ịmata YouTube Video Tags
Free keyword ngwá ọrụ
Ihe dị iche iche nke Free Keyword Tool bụ ọnụnọ nke nkewa n'ime edemede, nke na-enye gị ohere ịhọrọ mkpado kachasị mma maka gị, dabere na okwu ndị e tinyere na ọchụchọ ahụ. Ka anyị lebakwuo anya na usoro ọgbọ ahụ:
Gaa na Ngalaba Ngwá Ọrụ Na-enweghị Ihe Ị Ga-eme
Na ebe nyocha ahụ, mepee menu ndozi na edemede ma họrọ ihe kachasị mma.
Tinye obodo gị ma ọ bụ obodo nke netwọk mmekọ gị.
Na ntinye, tinye ajụjụ na search.
Ị ga-ahụ ndepụta nke mkpado ndị a họrọ, dị ka n'ọtụtụ ọrụ, ụfọdụ ozi banyere ha ga-adị naanị mgbe ị debanyere aha zuru ezu. Nnwale n'efu a na-egosi ọnụọgụ Google maka okwu ọ bụla ma ọ bụ ahịrịokwu ọbụla.
Taa, anyị nyochaa ọtụtụ ndị na-emepụta vidiyo na YouTube. Imirikiti ọrụ nwere ikpe ikpe n'efu, na ọrụ niile na-emeghe naanị mgbe ịzụrụ ihe zuru ezu. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa ime nke a, dịka ọ na-abụkarị iji mara mmasi nke otu ajụjụ.
Hụkwa: Tinye mkpado na vidiyo YouTube